Nhau - Kubatana
Kuti tizive zvirinani pamwe nekuvandudza kubatana kwebasa redu reJINJIA MACHINERY, kambani yedu yakaronga vese vashandi kuti vave nehukama hwekunze pamwe paJune 16.th, 2021. Dingindira rebasa ndere "Kubatana uye Kubatana - Batira pamwe".
Takatanga na8: 00 mangwanani uye takasvika kwataienda kwapera hafu yeawa. Basa racho rakaitwa nemitambo yakasiyana zvakanyanya. Mutambo wese wakagadzirirwa kuwedzera kubatana pamwe nekubatana. Mushure memitambo, takagadzira chikafu chinonaka isu pachedu. Munguva yese iyi isu takashanda pamwe nemumwe, tichiratidza mweya wekubatana weJINJIA zvakanaka kwazvo.
Ichi zvirokwazvo ibasa rekunze rekushandira pamwe. Inosimudzira hukama pakati pevanoshanda navo, uye zvakare inowana iyo kambani kubatana kuri nani uye kubatana. Kuburikidza nebasa iri, kuvimba kuti tichabatana sechikwata zvakanyanya. Izvo zvinotiunzira isu rakakwana timu inoshanda inoshanda mune ramangwana.
Yakanakisa timu uye mushandirapamwe zvinopa vatengi vedu zvakanakisa zvekutakura zvikamu uye masevhisi!
Post nguva: Jun-29-2021